Daawo: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay Saraakiil Maraykan ah (Sawirro) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Daawo: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay Saraakiil Maraykan ah (Sawirro)
Kismaayo ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay sarakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ka howlagala Soomaaliya, sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland.
“Kulankaan waxaa lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyadoo iskaashi buuuxa laga samaynayo sidii loo dardar galin lahaa howlgallada ka dhanka ah Argagixisada,”
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43327
10 Comments for “Daawo: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay Saraakiil Maraykan ah (Sawirro)”
May 4, 2021 - 10:39 pm
Maraykan iyo kooxda daalibaan oo heshiiska ka gaadhay colaada afganistan iyo ciidamadiisa oo ka hayaamaya, sheekada somalia goormay iyana soo afjarmaysaa???
Caruuraha caalamka waqtigii tababarka lagu qaadan jiray waa gebogebo…
May 4, 2021 - 10:45 pm
Al ustad sayidka halkaa kawad raysal wasaaraha soosocda aa tahay waa hadii iljeec noqoto madexweyne @cali kurtun meyla socotaa
May 4, 2021 - 10:47 pm
Haku dagan wadaadku high officer of cia
@Gaafaw horta sharcigii dhabayacadu soo hindistay ee AU MSBARE rafacay joojiyay ee oranaayay reerka laguma aamini karo wax wasiir dhaafsan sow lama cusbooneysiin oo Faroole ma oran afka un baa naga dhaxeeya.
Sxb sharcigaas hada majiro .hada reerku waa active.takale faroole .dhamaan soomaligalbed ayuu jeedey .haba loo badnade waa kii xaal bixiyey.sxb mataqaan mareexaan Regan tuli ilaa jinacsani oo gari koonbo isla degaan ma reer amir nuurba
Axmed waa lagu soo maqan yahay kkk
Walee caafimaad kuma fadhidid Caliyoow Buhodle.
Waxaan jecelahay in Ilahay i gaadhsiiyo oo arko col uu Axmed ku jiro oo Xabsi liinta ku cabaya,iyo wadanka oo Xoogagga wadaniyiinta gacabta ku hayaan.
Farool kooxduu ushaqayn (TIGRAI) jiray baa sheegtay, hada kablalax buu sheegtaa, oo absame lagu qaldo, ilka yarta waa layska heshiin finally,
Dadkaan waa wada dambiilayaal ama waa lawada qaban ama waa lawada dayn..
@Gaafow horta safaaradihii iyo NGO Kismaayo ku qulquli jiray xagee ka baxeen.Intii Axmed dhuxul 2da sanno loogu daray safaaradihii isku sawiri jiray waa joogsadeene.
@Somaligalbeed kkk Absame waa lagu meel gaarayaa oo card Kablalax ayaa hadda ku jira miyaad leedahay?Ciddan horta maskaxdoodu maxay u liigaysaa?Ilkayar ankee reer Diini oo 5/6 kala tirsada ma qoraan ankee reer Diini.Ninba meel buu ka baxay oo u qaraab tagay.
Dhabayaco Jubaland aan micno lahayn bay ka dhigtay Jubaland,sababtoo ah ilkayar ayay shock aan jirin ka qaadeen.Ilkayarna waa suufiyo cid ay wax u qabaan kala dhaxeeyaan aan aqoon.Waxaa kaaga daran waligaa arki maysid Ilkayar oo maserysan oo ka daba yuusaya dhabayaco.
Idinka dhabayacadu in ay idin leeyihiin ayay u haystaan.
Waar kutubo xoorkii Dhuxulayste waa naf la caari. Gaala Mareykan oo Iskooda uga shaqaysta Jubbaland ayuu sawir la galay. Wadaadow xaal qaado. Waxaa baa odhan jiray waannu jihaadaynaa….kkkk
Waa runtaa. Kareeto Majeerteen weeye dhuxulayste Absamahana badankooda waa dad hal dheg wax ku maqla. Laakiin maanta way soo jeedaan oo Geeda Naar ma hayo Absame badankiisa, waana ka diideen inay noqdeen kaadh Dhabayaco. Mar dhow waxaad maqli doontaan Dhuxulayste oo Badhaadhe ka sii tallaabahaya oo Booday iyo Masalaan sii cararahaya.
Midna ogaada adiga iyo Mr Bahal, Gaafow Absame maahan.
Golaha ka daa sheegashada beenta ah inaad Absame tahay. Suldaanku wuu ku og yahay ee dadka beenta ka daa. Waxaad tahay waannu ognahay ee nin yahow ka xishoo cibaadka Alle.
Waxba jubaland haku daalinee maad iska tiraahdan MJ mey tageran ina farmajo
Diid ama ha diidin jubaland waa magaalo Kablalax….. sory daroodka kale iyo
Somali waa ku hoyan kartaa